IGcokama ecaleni 'lokushaya' intatheli - Ilanga News
Home Izindaba IGcokama ecaleni ‘lokushaya’ intatheli
IGcokama ecaleni ‘lokushaya’ intatheli
Kuthiwa lo mculi ubhale ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ubeKwaSwayimane kwachitheka ojeqe nembuzi
UMBHALO weGcokama osezinkundleni zokuxhumana libalula uhlu lwabantu elifuna ukuthi baxolise kulo.
THANDEKA NGOBESE noSKHOSIPHI MTHEMBU
USOBISHINI umculi kamaskandi, uMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele, onikwe umnqamulajuqu wezinsuku ezilishumi ukuba akhokhe inhlawulo ka-R200 000 ngezinsolo zokusuka kubo eMdletsheni wayoshaya intatheli yephephandaba lesiZulu, iSolezwe ikubo eMsilili, KwaSwayimane ngoMsombuluko womhla ka-23 kuNcwaba (August) ngoba eyisola ngokudicilela phansi igama lakhe.
ILANGA lithole ukuthi uMthandeni okumanje usevulelwe icala ku-thiwa uhlasele uMnu Charles Khuzwayo kade kunomcimbi kubo. Ngaphandle kwalo mnqamulajuqu, lo mculi ongaqali ukuvela kabi ngokushaya abantu, unikwe omunye wokuba axolise esidlangaleni enga-kapheli amahora awu-48.
Leli phephandaba lithole ukuthi wenza lokhu emuva kombiko mayelana nesigameko esenzeka oNdini lapho kwabikwa ukuthi washa-ywa ngempama emuva kokudunga umcimbi womembeso. Kuthiwa wa-qala wanikela emahhovisi eSolezwe eyofuna le ntatheli oku-ngeyona eyabhala lolu daba.
Umthombo weLANGA uthi kwathi uma lo mculi nebutho lakhe bengamtholi uMnu Khuzwayo, bethola ukuthi ukubo, baqombola, banikela khona.
“Ngesikhathi befika, wangena egcekeni abantu bamjabulela ngoba bezitshela ukuthi uze emcimbini. Wacela le ntatheli ukuba baphumele ngaphandle kwegceke, eyiyenga ngokuthi bafuna ukushutha esinye seziqephu zedocumentary ezokhonjiswa kwaSABC kuwona lo nyaka. Wathi kubalulekile ukuba ibe khona njengoba yazi umlando omningi ngomculo kamaskandi.
“Wavuma uKhuzwayo baphuma. Sebengaphandle, lo mculi washintsha wabuza ukuthi kungani uMnu Khuzwayo emhlambalaza ngokubika udaba okungelona, wa-phinde wabhala ngaye ezinkundleni zokuxhumana. Akabange esamnika ngisho ithuba lokuphendula, wamngenela ngezimpama kubuka abantu waze wavuza igazi,” kusho umthombo.
Uthi kwathi uma esuka lapho, wabhala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ubeKwaSwayimane wayishaya intatheli kwachitheka oje-qe nembuzi. Kubikwa ukuthi lo mculi waqeda ukwenza lokho, wazi-qopha, ezincoma ngesenzo sakhe.
Ebuzwa uMthandeni ngalolu daba, uthe akayazi yena leyo nto, ngamanga. Uthe akwaziyo ngamanga aqanjwa ngaye ukuthi washa-ywa ngempama eMoses Mabhida Stadium, nasemcimbini wasoLu-ndi.
“Ukuthi ngashaywa ngempama akungehlisi isithunzi, ngeke ngaliwe yintombi ngokuthi ngishayiwe kodwa okwangicasula kakhulu nga-la manga wukuthi axabanisa abala-ndeli, kwachitheka negazi eGorge Goch Hostel.
“Noma sekunjalo ngilokhu ngibona lo mfa-na ezinkundleni zokuxhumana elokhu eqhubeka efafaza le nto. Kayisekho enye into ayikhulumayo ngaphandle kokulokhu efafaza le nto.
“Mhlawumbe kucasuke abalandeli bami, bamshaya ngoba baningi abafana nami abazenza iGcokama.
“Mina bengingeke ngiyenze leyo nto,” kusho uMthandeni.
Ebuzwa ngombhalo wakhe osezinkundleni zokuxhumana ngokuya KwaSwayimane washaya intatheli kwachitheka ojeqe, uthe baningi kabi abaze-nza yena ezinkundleni zokuxhumana, cishe lowo owabhala lokho ngomunye wabo.
U-Adv Thalente Mhlongo ongummeli kaMnu Khuzwayo, uthe uMthandeni sebemthumelele incwadi ephoqa ukuba asuse yonke imibhalo ayifake ezinkundleni zokuxhumana ngekilayenti labo, aphinde ayeke ukubhala ngalo ezinkundleni zokuxhumana.
“Kule ncwadi simazisile futhi ukuthi kumele axolise esidlangaleni ngokushaya ikilayenti lethu, kumele alinxephe-zele ngo-R200 000 zingakapheli izinsuku eziyishumi. Isixoliso sona kumele asenze esikhathini esingamahora awu-48,” kusho u-Adv Mhlongo.
Uthe udaba lwecala elivulwe emaphoyiseni bazolubheka nalo ukuthi buye-nzeka yini ubulungiswa.
Okhulumela iSABC, uNkz Mmoni Seapolelo, lo mculi aqambe ngayo amanga ngesi-khathi eyenga uMnu Khuzwayo, uthe kuyiqiniso ukuthi kunohlelo olubizwa ngoShuni kaMasikandi oluzovezwa ku-SABC 1 ngasekupheleni kwe-nyanga.
“Lezi zindaba zokungaziphathi kahle kweGcokama bezingakafiki, kodwa abanga-banikazi balolu hlelo yinka-mpani ezimele, iDurban Media House, ngakho-ke imibuzo kumele ibhekiswe kule nkampani,” kusho yena.
UMthandeni usolwa ngalokhu nje, kuzo-khumbuleka ukuthi eminyakeni embalwa edlule, wazuma intatheli yeLANGA, uMnu Mthobisi Sithole, emngcwabeni womlandeli kamasikandi KwaNongoma, wayi-shaya eyisola ngokubhala izindaba ezingezinhle ngaye.
Kwadlula izinsukwana enze lokhu, wafika emahhovisi eLANGA ezoxolisa ngesenzo sakhe. Kwabakhona umhlangano phakathi kwa-khe nayehamba nabo nabaphathi beLANGA, lapho kwagcina kuthelelwene khona amanzi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe likhona icala lokushaya elivuliwe emuva kokuba umgi-lwa eshaywe ngumsolwa owaziwayo mhla ka-23 kuNcwaba (August).
Previous articleIbuyiselwe ehhovisi imenenja kamasipala
Next articleNgeke aqashwe umqeqeshi omusha kwiBucs